Sandals Resorts Jamaica dia manampy resort vaovao mahafinaritra
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Barbados » Sandals Resorts Jamaica dia manampy resort vaovao mahafinaritra
Sandals Resorts International dia nanambara ny fahazoana fananana marika 2 sy ny fividianana ny tany amoron-dranomasina any Jamaika.
Sandals Resorts dia manangana sehatra ho an'ny fenitra vaovao amin'ny fahamendrehana ary ny fampiasam-bola mitohy any Jamaika.
Toeram-pialan-tsasatra roa ahitana sy faritra iray amoron-dranomasina no hovaina.
Azon'ny vahiny andrasana ny efitrano sy efitrano fandroana mihaja, kojakoja faran'izay tsara, fisakafoanana tsara ary golf.
Manamarika ny fahatokisan'ny marika ny toerana haleha, Sandals Resorts International (SRI), ilay trano fandraisam-bahiny manankarena indrindra any Karaiba, dia manazava fa matoky ny fahatongavan'i Jamaika izy miampy hotely vaovao miisa 3.
Ny filohan'ny Sandals Resorts International Adam Stewart dia nilaza fa hanova trano fandraisam-bahiny miisa 2 ao Jamaika azony tamin'ny taon-dasa - ny Jewel Dunn's River Beach Resort & Spa tany Ocho Rios ary ny Jewel Runaway Bay Beach Resort & Waterpark - miaraka amina paritra lehibe iray ny tany amoron-dranomasina mifanila amin'ny hotely Ocho Rios. Ireo fananana vaovao ireo dia hanolotra traikefa 3 miavaka eo ambanin'ny marika Sandals Resorts sy Beaches Resorts.
Ny drafitra fanitarana dia mamerina ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny voatahiry betsaka ao Jamaika, ny fananan'ny Dunn's River any Ocho Rios, miverina amin'ny fianakavian'i Sandals toy ny Sandals Dunn's River, ilay monikerera iray ihany rehefa nampidirina tamin'ny portfolio tamin'ny 1990.